IKEA dia mamoaka boky torolàlana 6 ho an'ny ankizy kely ao an-trano | Famoronana an-tserasera
Iza no tsy nanao ny seza lapa ho toy ny zaza Sa miaraka amin'ireo ondana sy lambam-baravarana lamba hafa iray lay? Ity hevitra ity ihany avy amin'ny IKEA izay namoaka andian-drafitra mba hahafahantsika mampiasa ny fanaka malaza indrindra ho toy ny fototr'ireo trano mimanda, fivarotana ary maro hafa.
Una hevitra mahafinaritra avy amin'ny departemanta marketing IKEA ary manangona izahay eto mba hampahafantatra anao. Amin'izao andro mbola itokisana any an-trano ho an'ny maro izao, ity hevitra ity dia tsara kokoa noho ny fampiasana ireo fanaka ananantsika ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny ary hamadika azy ireo ho fotoanan'ny majika izay mahafinaritra ny kely.
Efa IKEA Russia no iray naneho izany hevitra lehibe izany miaraka amin'ny boky torolalana enina izay hamadika ny fanaka isan-karazany ho lasa rafitra filalaovana ho an'ny ankizy kely ao an-trano.
La Ny masoivohon'ny fanaovana doka instinct no iray izay niara-niasa tamin'ny IKEA hamolavola ireo boky torolàlana momba ny torolàlana ireo ary izany dia mitovy amin'ny endrik'ireo hitantsika ihany rehefa mamaha ireo boaty misy ireo fanaka izay amboarantsika ny tenantsika isika.
Podemos mamorona avy amin'ny lapa mankany amin'ny lay milalao na koa fanamafisana iray manontolo miaraka amin'ny sofa iray ihany. Raha ny marina dia manana ny fanaka manokana ahafahantsika mampiasa azy io ho toy ny fototr'ireo fanamboarana ireo ho an'ny ankizy kely. Fa andao, afaka mampiasa ny an'ny tenantsika isika ary mampiasa an'io boky torolalana io mba hamoronana rafitra milalao izay matetika mitondra tehaka avy amin'ireo zanatsika.
Matetika i IKEA dia manaitra antsika amin'ny tolo-kevitra famoronana indrindra como el io no loharanon'ny sofa ary nahafahanay nanoratra ny anaranay na nanome izany fikitika manokana izany tamin'ny fanomezana tamin'ny karatra. Orinasa manohy mampita ny tenany amin'ny fahaiza-mamorona ilaina mba hidirana amin'ny andavan'andro.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » IKEA dia maniry ireo ankizy kely ao an-trano hamorona ny tranony, fivarotana ary maro hafa
Angamba ianao nandiso tsipelina ilay litera 'g' tamin'ny andronao rehetra